AEnema ngesixhobo - Izinto Zobugcisa
Oku kusekwe kwinkqubo yokuhlekisa nguBill Hicks, owayesithiyile isixeko saseLos Angeles. Wayecinga ukuba abantu babengekho ngaphezulu kwaye babemele iMelika kubi kakhulu. Kwindlela yakhe yesiqhelo, esampuliweyo kwingoma, uHicks uthetha ngeCalifornia ewela elwandle kunye nokwenza iArizona Bay. UHicks wabulawa ngumhlaza ngo-1994; Ngo-1997, uRykodisc wakhupha i-albhamu ye-Hick 'comedy ebizwa ngokuba yi-comedy I-Arizona Bay .
Imvumi ephambili uMaynard Keenan wayengumlandeli omkhulu ka Hicks, kwaye wakhuthazeka kwiindlela zakhe zokuhlekisa, ezazisoloko zinamagqabantshintshi entlalontle. Imizobo ye-albhamu iqulethe umzobo kaHicks enxibe ngathi ngugqirha kunye negama elithi, 'Elinye iGorha elifileyo.'
UMaynard uchithe iinyanga ezi-6 ebhala iingoma. Nangona ekhankanya i-LA, akathethi ngokuthe ngqo ngesi sixeko. Ingoma yengcinga ebuza, 'Bekuya kuthini ukuba yonke into itshatyalalisiwe kwaye kufuneka siqale phantsi.' I-LA kule meko imele into engalunganga kwihlabathi emehlweni kaMaynard, kwaye uzama ukudlulisa umyalezo wokuba sidinga into enje ngedolophu ewela elwandle ukuba yenzeke ngaphambi kokuba siguquke njengohlanga.
Le ngoma yaphefumlelwa xa iThuluzi lenziwa ngandlela-thile ye-L Ron Hubbard inkundla eLos Angeles. Ibhendi yayibonakala yothukile xa ifika kubo bonke abafundi be-yuppie baseHubbard kwaye babona ukuba baziva bezizinto ezingenantsingiselo abazilindeleyo.
'AEnema' ngumdibaniso wamagama. 'U-Anima' ngumfazi we-archetype oqinisekiswe sisithandi sobulumko / ugqirha wezengqondo uCarl Jung ukuba abekho ngaphakathi kwendoda. 'I-Enema' kukuhlanjululwa kwethamo lomntu ngokugungxula amanzi. Umdibaniso ungathetha into ecaleni kwemigca yokukhupha into engekhoyo ngaphakathi kuthi.
Kwingoma, iMaynard inika uluhlu lwabantu abanokwenza ngaphandle kwayo. Ingoma sisikhumbuzo malunga nokubalulekileyo kunye nokungabikho kubomi obude. Ingoma inomsindo omkhulu ojolise ngokuvakalayo kwimibono yabantu abaphezulu, kodwa inobuchule obungaphephekiyo kuyo.
mike-oakhurst, NJ, ngaphezulu kwe-3
ndiye ndankqonkqozwa kodwa ndiyavuka kwakhona lyrics
andikuthembisanga ngoma yengca yegadi
andinakuhlala nawe okanye ngaphandle kwakho lyrics
Indoda ezintlanu band band sign lyrics
apha ndiya kwakhona amazwi anentsingiselo